Waxaa laga yaabaa inaad hayso fikradda ah in dadka badankood ay wax ku qori karaan warqad. Si kastaba ha noqotee, macnaheedu maaha in qof kastaa uu yahay qoraa wanaagsan. Ku dhigida jumlada ugu horeysa warqad waxay caqabad ku noqon kartaa qorayaasha. Haddii aad rabto inaad ku bilowdo xirfad qoraal, maqaalkani wuxuu ku siin doonaa koorsooyinka qorista tooska ah ee bilaashka ah ee qorayaasha cusub.
Way cadahay in qofku baran karo wax walba khadka tooska ah. Barashada sida wax loogu qoro khadka tooska ah waxay lamid tahay inaad hoos ugu soo degto si aad dukaamo uga hesho dukaanno. Qoraalku wuxuu kuugu muuqan karaa mid aad kuugu fudud laakiin waxaa jira dhowr fure oo aad ku noqon karto qoraa wanaagsan.
Si aad u noqotid qof hal abuur leh xagga qoraalka, waa inaad ku dheganaataa farsamooyinka saxda ah ee kaa dhigi doona inaad ka dhex muuqato qorayaasha kale. Marka, kuwa bilowga ah ee doonaya inay ku sii raacaan xirfad qorista, koorsooyinka qorista tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay qorayaasha cusub ee maqaalkani waa shay la hubo adiga.
Sideen ku noqon karaa qoraa wanaagsan?
2. Joogtee jadwalkaaga
3. Isticmaal laylisyo qoraal ah
4. Hel joornaal
5. Ka mid ahaanshaha koox qoraal ah
6. Ku tababaro noocyada qoraalka
7. Cilmi baaris
8. Qaado koorsooyin qoris ah
Sideen ugu hagaajin karaa xirfadahayga qorista khadka tooska ah?
Koorsooyinka Qorista ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Qorayaasha Cusub
Naxwaha iyo hakadka
Tixraacyo Ficil iyo Basas
Naxwaha Waxqabadka Ingiriisiga
Bilow Qorista Xarafka
Sida loogu guuleysto Qorista Codsiyada
Qoraalka qoraalka: Aasaaska aasaasiga ah
Ku Bilaabista Qorista Qormada
Heesta Qoraalka: Qoraaga Heesta
In kasta oo dadka badankood wax qori karaan, haddana qof kastaa kuma fiicna qoraa. Kahor intaadan noqon qoraa wanaagsan, waxay kugu qaadan doontaa waqti inbadan inaad kuqurxiso xirfadahaaga qoraalka. Maskaxda ku hay in tani aysan ahayn wax aad ku qaban karto toddobaadyo gudahood.
Sidaa darteed, waa kuwan tilmaamaha la raacayo si aad u noqoto qoraa wanaagsan:
Inta lagu jiro maalmahaaga xanaanada caruurta, waxaa lagu barayaa sida loo akhriyo (ku dhawaaqida ereyada) marka hore intaadan qorin. Kani waa isku mid nooc kasta oo qoraal ah.
Had iyo jeer waa muhiim in la akhriyo oo la fahmo ka hor qorista. Hagaag, ma qori kartid kaliya waxaadan aqoonin maxaa yeelay waa inaad marka hore aqriso.
Qorayaasha waaweyni waxaa lagu yaqaan inay yihiin aqris-yahanno xur ah. Markaad si ballaaran oo isdaba joog ah wax u akhrido, waxaad ogaanaysaa habab cusub oo qoraal ah. Halkaas kuma eka oo kaliya. Waxa kale oo aad heli doontaa agab ilo kaa caawin doona inaad xoojiso xirfadahaaga qoraalka oo aad noqoto qoraa wanaagsan.
Hadda oo aad adeegsatay farsamada akhriska joogtada ah, waxaa la joogaa xilligii wax la qori lahaa.
Mid ka mid ah furayaasha ugu waaweyn ee lagu xirayo xirfadahaaga qorista si aad u noqotid qoraa fiican ayaa ah inaad horumariso jadwalka qorista maalinlaha ah. Waxaad kubilaabi kartaa adoo gooniya waqti gooniya maalinti inaad xor noqon karto. Waxay noqon kartaa xilliga firaaqadaada - xitaa haddii ay tahay toban daqiiqo oo keliya, isticmaal muddadaas oo wax uun qor.
Markaad sidan ku sii wado maalin kasta iyo akhrinta waxyaabo kala duwan, maskaxdaadu waxay horumarinaysaa wax badan iyo sidoo kale xirfadahaaga qorista. Hubso inaadan dhaafin maalmaha qaarkood maxaa yeelay waxay u noqon kartaa dib u dhac horumarkaaga.
Kordhinta iyo laylisyadu waxay tilmaan u yihiin qorayaasha cusub. Adoo adeegsanaya dardargelinta, waxaad ku baran doontaa sida loo bilaabo jumlada ugu horreysa nooc kasta oo qoraal ah. Tusaale ahaan, barashada qaab dhismeedka qorista baloogga, qorista maqaalka, ama qormooyin loogu talagalay riwaayad, iwm.
Waxaa jira dhowr dardaaran iyo jimicsi loogu talagalay bilowga khadka tooska ah. Tusaalaha weyn ee degdega ayaa ah Qoraal bilaash ah.
Mid ka mid ah furayaasha lagu noqdo qoraa wanaagsan ayaa ah in la diiwaan geliyo dhacdooyinka dunida ka taagan. Marka, halkan waa halka aad uga baahan tahay joornaal diiwaan gelin ah.
Dhacdooyinkan nolosha dhabta ah waxay ku siin doonaan dhiirigelin si aad u curiso fikrado sheekooyin ama qormooyin aad wax ku qorto.
Kaligaa ma ogaan kartid kaligaa. Waxaa jira waxyaabo kale oo aad uga baran doontid qoraa kale oo kaa caawin doona inaad dhisto xirfadahaaga qorista.
Sababtaas awgeed, waa inaad ku biirtaa koox qoraal ah oo ay ku jiraan shabakad qorayaal ah oo niches badan leh. Markaad ku biirto koox qoraal ah, waxaad fursad u heli doontaa inaad wax badan ka barato qorayaasha ku xeel dheer xirfadda.
Waxaa laga yaabaa inaad aad ugu fiican tahay nooc qoraal gaar ah laakiin way fiicnaan doontaa haddii aad barato qaababka kale ee qorista.
Haddii aad ku wanaagsan tahay qorista qormada, iskuday oo baro barashada khayaaliga ama qorista naxdinta leh. Tani waxay sii ballaarin doontaa xirfaddaada qorista waxayna kuu diyaarinaysaa fursado badan.
Ma qori kartid wax shaqo ah adiga oo aanad sameynin cilmi baaris. Xitaa qoraaga ugufiican cilmi baarista inta la isu keenayo qayb kasta oo shaqo ah.
Marka, kahor intaadan qorin, sifiican u baar.
Haddii aad tahay qoraa cusub, qaadashada casharrada qorista waxay kuu noqon doontaa caawin aad u weyn. Adoo qaadanaya casharradan, waxaad ka baran doontaa hababka qorista dhawaanahan qorayaasha caanka ah.
Waxay sidoo kale kuu abuureysaa barxad aad ku weydiiso su'aalo isla markaana aad ra'yi uga hesho qorayaasha xirfadleyda ah.
Qoraalku waa hab tartiib tartiib ah sida barashada oo kale. Qorayaasha waaweyn weligood kuma ay dhalan xirfadaha qorista oo aad u wanaagsan. Kaliya waxay ku weynaadeen qoraalka maxaa yeelay wax badan ayey u hureen si ay u xoojiyaan xirfadahooda qorista.
Waxaad sidoo kale noqon kartaa qoraa weyn adoo ku dadaalaya xirfadahaaga qorista khadka tooska ah adigoon lacag bixin. Sidaa darteed, koorsooyinka qorista ee soo socota ee internetka waxay ku siin doonaan aasaas adag oo qoraal ah:
Qormada Naxwaha Ingiriiska & Qormada
Ingiriisiga loogu talagalay Suxufiyiinta: Fikradaha Muhiimka ah
Ingiriisiga loogu talagalay Suxufiyiinta: Hadalka Bilaashka ah iyo Isbeddellada Warbaahinta
Diyaarinta AP * Imtixaanka Afka Ingiriisiga iyo Iskuxirka
Sida Loo Qoro Qormo
Haddii aad tahay qoraa cusub ama bilow ah, waad kobcin kartaa xirfadahaaga qoraalka si aad u noqotid qoraa wanaagsan adoo qaadanaya koorsooyinka qorista ee khadka tooska ah.
Koorsooyinka qorista tooska ah ee bilaashka ah ee qorayaasha cusub waxaa ka mid ah:
Koorsadan, waxaad ku cusbooneysiin doontaa xusuustaada aaladaha kaa caawin doona inaad hagaajiso qoraalkaaga. Aqoonta aad ka heshay koorsada ayaa kaa caawin doonta inaad fahamto koorsooyinka kale.
Koorsada waxaa kujira muxaadarooyin fiidiyoow gaagaaban oo aad wax ka baran doontid. Ka dib, waxaad ku tababbari doontaa dhammaan wixii aad ka baratay fiidiyowyada. Waxay kugu qaadaneysaa toban (10) daqiiqo inaad kudhameysato koorsada.
Naxwaha iyo ciwaanku waxay ka kooban yihiin manhajyada soo socda oo ay ka mid yihiin ku takhasusidda qorista, ereyada ficillada & isku xirnaanta, jumladaha isku dhafan iyo kuwa isku dhafan, iyo kooma badan, qaab dhismeed isbarbar socda, iyo jumlado kala duwan.
Markaad dhamaysato koorsada, waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato ereyada ficil ee saxda ah ee aad adeegsanaysid, adeegso jajabyada si wax ku ool ah, ugana qori karto luqadda Ingiriisiga.
Koorsadan internetka waxaa bixiya Tamy Chapman.
Shahaadada lacag bixinta
Duration: 4 toddobaad
goobta: Jaamacadda California, Irvine iyada oo loo marayo Coursera (khadka tooska ah)
Koorsadani waxay dib u eegi doontaa ficillada ficil ee aad ku baratay fasallada hordhaca ah ee Ingiriisiga. Waxaad sidoo kale baran doontaa qaabab cusub oo fal ah. Intaa waxaa sii dheer, koorsadu waxay ku bari doontaa sida loo isku daro waqtiyada loogu talagalay ku hadalka Ingiriisiga hooyo.
Waxaad marin uheli doontaa dhamaan muxaadarooyinka iyo agabyada fiidiyowga ah. Koorsadani waa mid ka mid ah koorsooyinka qorista khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay qorayaasha cusub.
Kadib qaadashada koorsadan, waxay kaa caawin doontaa inaad kobciso xirfadahaaga ku hadalka luuqadda Ingiriiska.
Koorsadu waxay ka kooban tahay manhaj ay ka mid yihiin simple, horusocod, iyo falal ficil ah waqtiyada dib u eegis, pkhaladaadka waqtiyada horumarka, pcaawimo & qaabab dhammaystiran, iyo bdeyn bixinta.
Tilaabooyinka Falka iyo Tooska waxaa wax ka dhiga Tamy Chapman iyo Nicole Jacobs.
Naxwaha Waxqabadka Ingiriisiga ayaa kaa caawin doona inaad ku horumariso hadalkaaga guud iyo qorista adoo adeegsanaya naxwaha wanaagsan. Waxaad baran doontaa sida loo abuuro weedho iyo weedho isku dhafan oo Ingiriis ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad baran doontaa sida loo qoro baaragaraafyada isku xira taas oo ka dhigaysa qoraalkaaga mid abaabulan.
Koorsadu waxay ka kooban tahay 14 fiidiyow. Waxaad qaadan doontaa shaqooyin iyo imtixaanno qayb kasta ka dib. Waxaad kala soo bixi kartaa shaqooyinka la socda jawaabaha.
Koorsadani waa mid ka mid ah koorsooyinka qorista khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay qorayaasha cusub.
Koorsada waxaa bixiya Martin Tilney.
Taariikhda billowga: Iskuday
Duration: 2 - 3 saacadood
goobta: Udemy (khadka tooska ah)
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida loo horumariyo fikradaha ugana muuqato qoraalka iyo tafatirka. Waxaad sidoo kale dhageysan doontaa qorayaasha caanka ah sida ay ku bilaabeen qorista. Qorayaashaan waxaa ka mid ah Louis de Bernières, Patricia Duncker, Alex Garland, Abdulrazak Gurnah, Tim Pears, Michèle Roberts, iyo Monique Roffey.
Ka dib markaad maqasho iyaga, waxaad horumarin doontaa fikradahaaga oo aad bilaabi doontaa inaad u rogto dhacdooyinka goob shirqool ah.
Koorsadu waxay ku siin doontaa barxad si aad dib ugu eegto shaqooyinka qorayaasha kale, aad uga hesho ra'yi iyaga ku saabsan shaqadaada, isla markaana aad iyaga u siiso jawaab celin.
Haddii aad xiisaynayso qorista sheekooyinka, koorsadani waa shay la hubo oo adiga kugu habboon. Koorsadu waa mid ka mid ah koorsooyinka qorista khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay qorayaasha cusub.
Bilow Qorista Qisooyinka waxaa baray Derek Neale.
Shahaadada waxaa laga heli karaa $ 64
Taariikhda billowga: 5-ta bisha Luulyo sanad walba
Duration: 8 toddobaad (3 saacadood usbuucii)
goobta: Jaamacadda furan iyada oo loo marayo FutureLearn (khadka tooska ah)
Koorsadani waxay sahmineysaa qorista shaashadda, qorista sheekooyinka, iyo qorista naqshadeynta ciyaarta fiidiyowga. Intaad qaadanaysid koorsadan, waxaad abuuri doontaa hanti aqooneed asal ah (IP) mashruuc transmedia ah. IP-gu wuxuu ka koobnaan doonaa noocyo qoraal ah oo IP-gaaga ah oo ku qoran barnaamijyo kala duwan.
Intaa waxaa dheer, waxaad qori doontaa sheeko oo aad ku hagaajin doontaa cutubyada ugu horreeya bogagga furitaanka ee filim ama bandhig TV oo aad horumarineyso fikradda naqshadeynta ciyaarta ee IP-gaaga.
Ka dib markaad ka shaqeyso mashruucaaga, waxaad u daabici doontaa shaqada asxaabtaada si ay dib ugu eegaan adiguna sidoo kale waad dib u eegi doontaa kuwooda.
Koorsadan waxaa bixiya Tamy Chapman iyo Nicole Jacobs.
goobta: Jaamacadda Michigan State iyada oo loo marayo Coursera (khadka tooska ah)
Koorsadan waxaa loogu talagalay qof kasta oo dalbanaya shaqooyin ama barnaamijyo waxbarasho. Koorsadan, waxaad ka maqli doontaa loo shaqeeyaha iyo macallimiinta oggolaanshaha si ay u ogaadaan waxa ay ka raadinayaan musharrixiinta.
Waxaad baran doontaa sida loo qoro codsiyada qasabka ah, CV-yada (ama résumés), waraaqaha daboolka ah, iyo qoraalo shaqsiyeed.
Sida loogu guuleysto qorista codsiyada waa mid ka mid ah koorsooyinka qorista tooska ah ee bilaashka ah ee qorayaasha cusub.
Koorsada waxaa maamula Hilary Jones iyo Pamela Hafekost.
Duration: 3 toddobaad (3 saacadood usbuucii)
goobta: Jaamacadda Sheffield iyada oo loo marayo FutureLearn (khadka tooska ah)
Koorsadani waxaa loogu talagalay dadka doonaya inay ku sii raacaan qoraal-sameynta shaqo ahaan. Halkan, waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro maqaallo qallafsan oo la xiriira bogagga shabakadda.
Qodobadan waxaa lagu bartilmaameedsanayaa macaamiisha mustaqbalka si loo kordhiyo ka warqabka astaanta, loo wado taraafikada, loo kordhiyo iibinta wax soo saarka iyo adeegyada, loona wargeliyo akhristayaasha.
Markaad koorsada dhamaysato, waxaad ogaan doontaa sida loo abuuro maqaallo iibiya oo loo bilaabo safarkaaga qoraalka qoraalka ah ee madaxbanaan.
Qoraalka qoraalka: Aasaaska aasaasiga waxaa bara Mason Komay.
Duration: saacadood 2
Koorsadani waxay kuu soo bandhigi doontaa saddexda nooc ee qormooyinka tacliinta. Waxaad baran doontaa sida loo hagaajiyo xirfadahaaga qorista kadib koorsadan.
Markaad dhammeysato, waxaad awoodi doontaa inaad qortid bayaanka qoraalka ee qormooyinka iyo cutubyada jirka ee sifiican u horumarsan. Waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad qorsheyso oo aad qorto, isbarbar dhigto & isbarbar dhigto, sababaha iyo saameynta, iyo qormooyinka doodda.
Koorsadu waa mid ka mid ah koorsooyinka qorista khadka tooska ah ee bilaashka ah ee loogu talagalay qorayaasha cusub.
Duration: 5 toddobaad (18 saacadood usbuucii)
Taariikhda billowga: 24-ka Maajo sanad walba
Haddii aad hibo u leedahay muusigga, koorsadani waxay awood kuu siineysaa inaad ka faa'iideysato. Waxaa laga yaabaa inaad raadineysay sida loo bilaabo qorista heestaas maskaxdaada laakiin ma taqaanid sida loo maro.
Sidaa darteed, koorsadani waxay ku bari doontaa hanaan hufan oo wax ku ool ah oo loogu talagalay hagaajinta heesaha si ay u muujiso fikradahaaga iyo shucuurtaada. Waxaad ku bilaabi doontaa koorsada adigoo baranaya aaladaha loo adeegsado laxanka gabayga. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad si habsami leh u shaqeyso intaad dhimanaysid isla wakhtigaas.
Koorsadu waxay ka kooban tahay shaqooyin aad qaban doontid oo aad u daabici doontid dib u eegista asxaabtaada. Hawlahan ayaa inta badan ah xariiqyo halbeegga ah ama qaybo ama heeso.
Duration: 5 toddobaad (17 saacadood usbuucii)
goobta: Kuleejka Muusikada Berklee ee loo maro Coursera (khadka tooska ah)
Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida loo qoro warbixinno farsamo oo kala duwan oo ay ku jiraan warbixinnada cilmi baarista, warbixinnada shaybaarka, warbixinnada naqshadeynta iyo suurtagalnimada, warbixinnada horumarka, iyo warbixinnada la-talinta.
Waxaad sidoo kale baran doontaa luqadaha, qaabdhismeedka, iyo qaababka loo isticmaalo qorista warbixintan.
Markaad dhamayso koorsada, waxaad heli doontaa xirfadaha qorista ee loo baahan yahay si loogu gudbiyo macluumaadka laga soo ururiyay shaqadaada farsamo ama tijaabo ah.
Duration: 5 toddobaad (19 saacadood usbuucii)
Taariikhda billowga: 17-ka Maajo sanad walba
goobta: Moscow Institute of Physics iyo Teknolojiyada iyada oo loo marayo Coursera (khadka tooska ah)
13 Koorsooyinka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Qorista Mawduuca
15 Meelood Si Loogu Helo Imtixaan Ingiriisiga Ah Oo Jawaabo PDF ah
12 Imtixaanka Ingiriisiga ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadada ah
13 Koorsooyinka Kombuyuutarka ee Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Shahaadada wata
Koorsooyinka Free Online koorsooyinka interneedka wax ku barta internetka
Previous Post:15 Shaqooyinka Ugu Sarreeya Baahida Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:10 Jaamacadaha Sare ee Shiinaha loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Pingback: Talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay Qorista Odhaah Shakhsiyeedka 2021